Guddiga Gurmadka Abaaraha Puntland oo mar kale ku baaqay in la gargaaro dadka ay abaartu saameysay(Muuqaal) | RBC Radio
Guddiga Gurmadka Abaaraha Puntland oo mar kale ku baaqay in la gargaaro dadka ay abaartu saameysay(Muuqaal)	Posted on March 18, 2017
RBC, Sawiro, Video, Wararka
Sheekh Daahir Aw-cabdi oo kamid ah Guddiga gurmadka culimada ee abaaraha ayaa ka sheekeeyey heerarka ay gaartay abaartu,rafaadka iyo dhibaatooyinka ka dhashay ,isagoona ugu baaqay ummada Soomaaliyeed iney gacan ka geystaan.
….””Wadankii Soomaaliya la oran jiray haddii uusan Ilaahay deg deg Raxmadiisa ku maashayn, wuxuu halis ugu jiraa inuu gaalo iyo kaniisado gacanta u galo, ilaahay uun baa arrintaas naga saari kara” ayuu yiri Sheekh Daahir Aw-cabdi, oo sidoo kale ugu baaqay bulshadda Soomaaliyeed in wixii ay heli karaan ay ku caawiyaan walaalahood.
…..”Dalka iyo dibadiisa haddaad joogtaan, qof kastaa wuxuu awoodo inuu bixiyo, ninka fiqiirka ahi ma waayayo $1 dollar, kan dhexdhexaadka ahi ka bixiyo$100 ilaa $500 dollar, Qofka maalqabeenka ahina ka bixiyo illaahay wixii uu siiyay” ayuu yiri
Dhanka kale Sheekh Axmed Daahir ayaa isna sheegay in dhibaatooyin badan ay ku sugan yihiin dadka reer miyiga ah ,wuxuu sheegay in nafaqo darro xoogan ay hayso hooyooyinka iyo carruurta loona baahan yahay in raashin iyo daawo la gaarsiiyo.
….””Waxaa la ii sheegay Caruuro wax lagu habo la waayay, oo caano lo waaayay, baar xun ayaa jira jihada, raashin la’aan, daawo la’aan ayaa ka jirta”ayuu yiri
Guddoomiyaha Guddiga gurmadka abaaraha Puntland Sheekh Fu’aad Xaaji Nuur ayaa sheegay in todobaadkii hore lacagta ay soo bandhigeen ee guddiga soo gaartay muddo 35 maalood gudahood ah ay aad u yar tahay marka loo barbar dhigo xadiga dhibaatada abaarta.
Sheekh Fu’aad Xaaji Nuur ayaa ku baaqay in dadka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan u gurmashada walaalahooda Soomaaliyeed ee ay abaartu saameysay.